Xiisaddaha Ka Dhashay Ridistii Shariif Xasan Sheikh Aadan......
Xiisadda ay reebtay ridistii shariif xasan sheikh aadan ayaa shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho Qaarkood ku tilmaameen Mid uur-ku-taalo ku reebaysa shacabka soomaaliyeed islamarkaana u muuqata mid ka dhalatay muquunis aan loo meel dayin islamarkaana aan waafaqasanayn sharciga xaaladda degdega ah ee dalku ku jiro, iyadoo ay Saamayn weyn ku yeelatay xarumaha waaweyn wada hadalka bulshada, Hadal Hayanta Ugubadan ee laga hadal hayo dadweynaha dhexdooda iyo suuqyada magaalada muqdisho .
Intaas kadib si aan wax uga Ogaado Fekerka ay bulsho weynta soomaaliyeed ,gaar ahaan kuwa reer muqdisho Ugu muuqato Ridista shariif xasan sheikh aadan ayaan waxaan ka waraystay waxgarad waayo soo joogay iyo Qaar ka tirsan Bulsho weynta kala duwan ee ku nool magaalada muqdisho .
Waxaan ugu horaynba Hadalka ii bilaabay xuseen raage oo kamida Duqowda waayo araga ah ee soo joogay dowladihii dalka soo maray iyo waqtigii gumaysigaba waxuuna hadalkiisa ku cabiray sida wadanku maanta yahay iyo sida xaalku noqon karo hadii xilka laga qaaday shariif xasan sheikh aadan.
''Ilaah ayaa Mahad leh ,waxaana anigu la amakaag sanahay oo marnaba iga degi la, horta yaa wadanka iska leh yaase u maqan ? waa su,aasha aan keligay is waydiiyo waayo waxaa haboon in dalka iyo dadku ay had iyo jeer taageeraan ninka dalkiisa iyo dadkiisa wax u qaban kara ,waxna ka dhigi kara ,waxay ila tahay shariif xasan sheikh aadan taariikhda ayaa qori doonta ,anigase waxuu iila muuqday nin diidanaa ciidamada Ethiopia islamarkaana ay taasi keentay maxaad u diiday ,waxaa keliya oo shariifka laga raacay sida muuqata waa intaas ,hadaba miyasan idiin muuqan sida wax u jiraan wadankan soomaaliya marba heer ayuu taagnaa maantana waxaa taariikhda iigu yaabka badan ay tahay Taangiga Ethiopiya oo dhex Gurguuranaya Magaalada muqdisho.
Sidoo kale waxaa isna fekerka ku aadan mawduucan ridista shariif xasan sheikh aadan ka hadlaya sulayman cabdi oo ku magac dheer (Ciiro) oo ah arday wax ka dhigta jaamacada muqdisho ''waxaan isleeyahay waxuu is bedel ku yimid siyaasadiisa islamarkaana waxay xaga fekerka ku kala duwanadeen masuuliyiinta sarsare ee dowlada taasina markii ay xukumada Ethiopia usoo tafa xaydatay inay dalka dhexdiisa keento kumanaan ciidamo ah islamarkaana welibana ay Gobol gobol ula heshiisay qaarna ay ula dagaalantay taas oo ah kala qaybi oo xukun mase noqon karto oo xiligan waxaan ku jirnaa xili dadku wax kala arkaan marka anigu waxaan shariif xasan sheikh aadan oran lahaa lama ridin ee waxaa usoo hoyatay taariikh ah baal dahab ah waayo xiligan lagu jiro oo ah xili siyasiyiintii soomaaliyeed ay u kala baxeen taageere Ethiopia iyo muwaadin soomaaliya hadii uu taageeray dhankii toosnaa waa baal dahab ah ayaa la oran karaa ''.
Sikastaba ha ahatee dadka badankiisa ayaa ku tilmaamay ridistii shariif xasan sheikh aadan mid aan xiligan meesha ku jirin islamarkaana aan waafaqsanayn weliba sharciga oo ah xiligan dalka soomaaliya oo ku jira xaalad degdega ah .
Jan 18, 2007: Maamulka Degmada Afgooye oo soo saaray wareegto ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya ruuxii lagu arko isagoo hub la dhex maraya degmada Afgooye la toogan doono.
Maamulka oo kulan deg-deg ah qaatay kaddib markii kooxo hubeysan ay maanta ishortaageen howlo canshuur ururin ah oo uu ka waday maamulka Degmadaas suuqyada degmada Afgooye ayaa waxaa ka soo baxay wareegtadaan.
Wareegtada ayaa waxaa lagu sheegay in maanta 4:00 galabnimo xilliga Soomaaliya cidii lagu arko inay hub ku dhex wadato gudaha Soomaaliya la dili doono, waxaana lagu muujiyay wareegtada in la dilo doono cid walba oo hub wadata, laguna amray sidaas ciidammada Ammaanka ee degmada Afgooye.
Arrintaan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay shacabka Degmada Afgooye oo sheegay inay wanaagsan tahay in cid walba oo hub wadata isla markaana khatar ku ah ammaanka guud ee degmada Afgooye la toogto, waxaana tani ay qayb muhiim ah ka noqonaysaa howlaha ay wadaan maamulka cusub ee dhawaan Dowladda Federaalka Soomaaliya ay u magacowday Degmada Afgooye.
Maanta ayaa dadweynaha degmada Afgooye waxay ku wareejiyeen gaari noociisu yahay Landcruiser-ka ah oo ay ugu deeqeen dadweynaha degmadaas ku nool, waxaana deeqdaan ay noqonaysaa middii ugu horreysay oo ay shacabka degmadaas guddoonsiiyaan maamul ka howlgala degmadaas.
Kulan looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo berri ka furmaya Addis Ababa
Jan 18, 2007: Waxaa lagu wadaa in lagu qabto xarunta Midowga Afrika ee Addis Ababa berri kulan looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, kulankaasoo ah mid qabanqaabadiisa ay socotay maalmihii ugu dambeeyay.
Kulankaan oo ay ka soo qaybgeli doonaan madax ka socota ururrada dunida qaarkood ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa xaaladda ka jirta Soomaaliya iyo sidii dunida ay ciidammo ku keeni lahaayeen gudaha Soomaaliya, gaar ahaan dalalka Afrikaanka ah.
Wararka ka soo baxaya xarunta Midowga Afrika oo uu kulankaas ka dhacayo berri ayaa waxay sheegayaan in lagu wado in Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Danjire Fall uu hadal dheer oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya ka jeediyo halkaas, waxaana sidoo kale hadalkiisa ka mid noqon doona qaabka ay qarammada midoobay u doonayso in lagu geeyo ciidammo nabad ilaalin ah gudaha Soomaaliya.
Kulankaan ayaa noqon doona mid si cad loogu qeexo sida wararka ku dhowdhow ay sheegayaan arrimaha guud ee Soomaaliya iyo sidii dunidu ay gacan ballaaran uga geysan lahayd howlaha ay dowladda federaalka Soomaaliya ka waddo gudaha Soomaaliya oo ah mid lagu doonayo in lagu dardargeliyo nabad ka curata gudaha Soomaaliya 16-sano kaddib.